Thierry Henry oo dalabyo ka helaya kooxo ka dhisan London, kaddib markii laga cayriyey shaqadii uu ka hayey kooxda Arsenal – Gool FM
(London) 13 Luuliyo 2016 – Tababare Arsene Wenger ayaa Thierry Henry ka cayriyey shaqadiisii tababarenimo ee uu ka hayey kooxda da’yarta Arsenal, waxaana Henry uu shaqadiisa ka sii wadan doonaa meel aan ahayn Gunners si uu u sii wato safarka uu ugu jiro inuu noqdo tababare dhammaystiran.
Tan iyo markii laga cayriyey Thierry Henry shaqada Arsenal, waxa uu dalabyo ka helayaa kooxo dhowr ah oo ka dhisan horyaalka Premier League si uu ula dhaqeeyo da’yartooda xilli ciyaareedka dambe.
Waxaa la aaminsan yahay in kooxda ka dhisan bariga magaalada London ee West Ham iyo kooxda kale ee Watford ay ka mid yihiin kooxaha diyaarka u ah inay Thierry Henry u ogolaadaan inuu isku wato shaqada tababarenimo iyo weliba shaqadiisa khabiirnimo ee Sky Sports.
Thierry Henry ayaa doonaya inuu aqoosiga tababarenimo ka helo UEFA, taasoo u saamaxeysa inuu tababare ka noqdo koox heerka koowaad ah sanadka dambe.
Macallin Arsene Wenger ayaa Thierry Henry ka ceyriyay shaqadii uu ka hayay machadka tababarka kooxda ee xiddigaha da’doodu ka hooseyso 18-ka sano, kaddib markii uu ku wargeliyey inuu kala doorto inuu si joogto ah uga shaqeeyo akadeemiga kooxda ama uu go’aansado inuu u go’ shaqadiisa kale khabiirnimo ee Sky Sports.
Halyeyga kooxda Arsenal ee Henry ayaa kaliya afar maalmood usbuucii imaanayey Machadka tababarka kooxda Arsenal, halka maalmaha kale uu la shaqeynayay hilinka la iska arko ee ciyaaraha ka faallooda ee Sky Sports oo uu sanadkii ku qaato 4 Milyan oo gini.
Goorma ayaa saxaafadda loo soo bandhigayaa saxiixa cusub ee Barcelona Samuel Umtiti, xilli la daabacay maaliyaddiisa? + Video